China Soft PVC Umthwalo Tags mveliso kunye nabenzi | SJJ
Abantu bahlala bebeka ithegi kwityesi yemithwalo yokwahlula eyabo kwabanye. Ukwahlula umthwalo wakho ngokukhawuleza xa ukuhambo, eyona ndlela ilungileyo kukusebenzisa ithegi yemithwalo ye-PVC eneelogo zakho okanye uphawu olukhethekileyo.
Abantu bahlala bebeka ithegi kwityesi yemithwalo yokwahlula eyabo kwabanye. Ukwahlula umthwalo wakho ngokukhawuleza xa ukuhambo, eyona ndlela ilungileyo kukusebenzisa i-Soft PVC yeLage Tag kunye neelogo zakho okanye uphawu olukhethekileyo.
I-PVC ethambileyo Iimpawu zempahlaZininzi izinto eziluncedo ngokuthelekisa ezinye, njengentsimbi, iplastiki elukhuni, iithegi zomthi okanye zephepha. I-PVC ethambileyoIimpawu zempahlazithambile, ziguquguquke ngakumbi, zinemibala ngakumbi kwaye zibhalwe ngakumbi kunee-tag zempahla zentsimbi, umahluko omkhulu ziithegi ezithambileyo zemithwalo ye-PVC aziyi kurusa emva kokusebenzisa ixesha elide. Iimpawu ezithambileyo ze-PVC zempahla zihlala ixesha elide kunezomthi. Iithegi zomthwalo we-PVC ezithambileyo aziyi kwaphulwa emanzini ngokuthelekisa iithegi zomthwalo wephepha.
Iimpawu zeethegi zomthwalo weSoftware yePVC zingenziwa kwi-2D okanye kwi-3D, iya kuba ngaphezulu kweetyhubhu kunezo zePV ezilukhuni. Incwadi ebhalwe nge-Embossed, i-Debossed, imibala, iprintiweyo okanye iilogo ezikroliweyo ziyafumaneka kwiithegi zomthwalo weSoftware yePVC. Ulwazi olupheleleyo lunokuprintwa okanye lubhalwe kwiithegi ezithambileyo zePVC. Isikhumba okanye imitya yeplastiki ikunceda ukuba ubeke okanye ukhulule iithegi zemithwalo ngokukhululekileyo nangaliphi na ixesha.
Ukhetho oluQhoboshelweyo oluqhelekileyo: imitya yeplastiki ebonakalayo, imitya yesikhumba, imitya ye-PU njl.
Ukupakisha: 1pc / ibhegi poly, okanye ngokutsho isicelo loMthengi
MOQ: iiPC ezili-100
Egqithileyo IiCoasters zePVC ezithambileyo
Okulandelayo: Ukutsalwa kweZipper ethambileyo
ithegi yomthwalo wesiko
Ithegi yerabha yesiqhelo
Imithwalo Bag Tag
Umthwalo weTag Tag
PVC Impahla Tag
Umatshini weRabha weMpahla
I-tag ezithambileyo zemithwalo ye-pvc
Ithenda yokuHanjiswa kwempahla
Iimpawu zeMpahla yegalufa
Ukuhombisa kunye nokulukwa kweethegi eziphambili